စငျကာပူတှငျ အဆောငျနေ ရှပွေ့ောငျးလုပျသား ကိုဗဈကူးစကျမှုမြား မွငျ့မားနဆေဲ - Myanmar Builders Guide
စငျကာပူ ကနျြးမာရေး ၀ နျကွီးဌာန (MOH) သညျ မလေ ၁၁ ရကျတနင်ျလာနတှေ့ငျ
စငျကာပူနိုငျငံ၌Covid-19 ဖွဈပှားမှုအသဈ ၄၈၆ ခုကို ထုတျပွနျခဲ့ပွီး စုစုပေါငျးအရအေတှကျ ၂၃,၈၂၂ ရှိပွီ ဖွဈသညျ။
လူနာသဈမြားထဲတှငျ စငျကာပူနိုငျငံသားနှဈဦးနှငျ့ အမွဲတမျးနထေိုငျသူမြားပါဝငျသညျ။
MOH က တနင်ျလာနတှေ့ငျ ဆေးစဈသညျ့စကျတှငျ အမှားရလဒျ ပွသခဲ့သဖွငျ့ ပွနျခြိနျညှိနရေသဖွငျ့ စဈဆေးသညျ့ အရတှေကျ လြော့နညျးနသေဖွငျ့ စမျးသပျမှုအနညျးငယျသာရှိခွငျးကွောငျ့ ရောဂါဖွဈပှားမှုတှရှေိ့ရခွငျး လြော့နညျးနသေညျဟု ရှငျးပွသညျ။
အဆောငျတှငျ နထေိုငျသောရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားမြားအကွား ကူးစကျမှုမြား ဆကျလကျ ဖွဈပျေါနသေညျ။
တနင်ျဂနှနေကေ့ တှရှေိ့ခဲ့သော ဖွဈပှားမှုအသဈ ၈၇၆ ခု တှငျ တဈခုမှာ ပွညျပမှ ပွနျလာသူ ဖွဈသညျ။
သူသညျ အသကျ ၆၁ နှဈအရှယျစငျကာပူနိုငျငံသားဖွဈပွီး ကာတာနိုငျငံသို့ခရီးထှကျခဲ့သူဖွဈသညျ။
စငျကာပူသို့ ဆိုကျရောကျသောအခါ stay-home အိမျမှ တဈဖဝါးမှ မခှာရနျ ညှနျကွားထားသညျ။
ဧပွီ ၂၆ ရကျက ပွညျပပွနျ ကူးစကျခံလူနာ ၂ ဦး တှခေဲ့ပွီးသညျ့နောကျ နှဈပတျကြျောအတှငျး ပထမဆုံးအကွိမျ ပွညျပပွနျတှငျ တှသေ့ညျ့ကူးစကျမှု ဖွဈသညျ။
အဆောငျမြားတှငျ နထေိုငျကွသော Work permit ကိုငျဆောငျသူ ရှပွေ့ောငျးလုပျသားမြားတှငျ ကူးစကျခံလူနာအသဈ ၈၆၀ ဦး တှခေဲ့သညျ။
သို့ဖွဈရာ အဆောငျပွငျပတှငျ တှရှေိ့သော လူနာအသဈမှာ ၁၁ ဦီး ဖွဈသညျ။
အကွမျးအားဖွငျ့ အဆောငျနေ ရှပွေ့ောငျးလုပျသား ၃၂၃ ၀၀၀ ဦး ရှိပွီး အမြားစုမှာ ဆောကျလုပျရေး လုပျငနျးခှငျ အမြိုးမြိုးတို့ တှငျ လုပျကိုငျနကွေသူမြားဖွဈသညျ။ အဆောငျနေ ရှပွေ့ောငျးလုပျသား ၂၀ ၉၆၁ ဦးကို ဆေးစဈခဲ့ပွီးပွီဖွဈရာ ရာခိုငျနှုနျးအားဖွငျ့ ၆ . ၅ ရာခိုငျနှုနျး ဖွဈသညျ။
အကယျ၍ အဆောငျနေ ရှပွေ့ောငျးလုပျသား ကူးစကျမှုကို ထညျ့မတှကျပါက လှနျခဲ့သညျ့ နှဈပတျက တဈနေ့ ပမျြးမြှ ၁၁ ဦီး ရှိခဲ့ပွီး ယခုအခါ ၉ ဦးသို့ လြော့ကခြဲ့သညျ။
စင်ကာပူတွင် အဆောင်နေ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ကိုဗစ်ကူးစက်မှုများ မြင့်မားနေဆဲ
စင်ကာပူ ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာန (MOH) သည် မေလ ၁၁ ရက်တနင်္လာနေ့တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံ၌Covid-19 ဖြစ်ပွားမှုအသစ် ၄၈၆ ခုကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်းအရေအတွက် ၂၃,၈၂၂ ရှိပြီ ဖြစ်သည်။
လူနာသစ်များထဲတွင် စင်ကာပူနိုင်ငံသားနှစ်ဦးနှင့် အမြဲတမ်းနေထိုင်သူများပါဝင်သည်။
MOH က တနင်္လာနေ့တွင် ဆေးစစ်သည့်စက်တွင် အမှားရလဒ် ပြသခဲ့သဖြင့် ပြန်ချိန်ညှိနေရသဖြင့် စစ်ဆေးသည့် အရေတွက် လျော့နည်းနေသဖြင့် စမ်းသပ်မှုအနည်းငယ်သာရှိခြင်းကြောင့် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေ့ရှိရခြင်း လျော့နည်းနေသည်ဟု ရှင်းပြသည်။
အဆောင်တွင် နေထိုင်သောရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအကြား ကူးစက်မှုများ ဆက်လက် ဖြစ်ပေါ်နေသည်။
တနင်္ဂနွေနေ့က တွေ့ရှိခဲ့သော ဖြစ်ပွားမှုအသစ် ၈၇၆ ခု တွင် တစ်ခုမှာ ပြည်ပမှ ပြန်လာသူ ဖြစ်သည်။
သူသည် အသက် ၆၁ နှစ်အရွယ်စင်ကာပူနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး ကာတာနိုင်ငံသို့ခရီးထွက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
စင်ကာပူသို့ ဆိုက်ရောက်သောအခါ stay-home အိမ်မှ တစ်ဖဝါးမှ မခွာရန် ညွှန်ကြားထားသည်။
ဧပြီ ၂၆ ရက်က ပြည်ပပြန် ကူးစက်ခံလူနာ ၂ ဦး တွေ့ခဲ့ပြီးသည့်နောက် နှစ်ပတ်ကျော်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ် ပြည်ပပြန်တွင် တွေ့သည့်ကူးစက်မှု ဖြစ်သည်။
အဆောင်များတွင် နေထိုင်ကြသော Work permit ကိုင်ဆောင်သူ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများတွင် ကူးစက်ခံလူနာအသစ် ၈၆၀ ဦး တွေ့ခဲ့သည်။
သို့ဖြစ်ရာ အဆောင်ပြင်ပတွင် တွေ့ရှိသော လူနာအသစ်မှာ ၁၁ ဦီး ဖြစ်သည်။
အကြမ်းအားဖြင့် အဆောင်နေ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ၃၂၃ ၀၀၀ ဦး ရှိပြီး အများစုမှာ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင် အမျိုးမျိုးတို့ တွင် လုပ်ကိုင်နေကြသူများဖြစ်သည်။ အဆောင်နေ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ၂၀ ၉၆၁ ဦးကို ဆေးစစ်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ရာ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၆ . ၅ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ အဆောင်နေ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား ကူးစက်မှုကို ထည့်မတွက်ပါက လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပတ်က တစ်နေ့ ပျမ်းမျှ ၁၁ ဦီး ရှိခဲ့ပြီး ယခုအခါ ၉ ဦးသို့ လျော့ကျခဲ့သည်။